Isimada Puntland oo go'aan cusub kasoo saaray xiisadda PSF kadib baaqii uu diiday Deni - Caasimada Online
Home Warar Isimada Puntland oo go’aan cusub kasoo saaray xiisadda PSF kadib baaqii uu...
Isimada Puntland oo go’aan cusub kasoo saaray xiisadda PSF kadib baaqii uu diiday Deni
Boosaaso (Caasimada Online) – Qaar ka mid ah Isimada Puntland ayaa soo saaray baaq cusub kasoo saaray xiisadda ka dhex oogan madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni iyo agaasimihii hore ee ciidamada PSF Maxamuud Cismaan Cabdullaahi Diyaano.
Isimada soo saaray baaqa oo gaaraya 12 ayaa taageeray go’aanadii horey uga soo baxay Isimada ka horreeyey, marka laga reebo hal qodob oo ah in milkiyadda hubka, ciidanka iyo agabka kale ee PSF loo reebo agaasimaha xilka laga qaaday.
Go’aankii Isimada hore, gaar ahaan qodobka dhigaya in hubka iyo hantida PSF uu si gaar ah u qaato agaasimihii hore, ayaa waxaa ku gacan seeray xukuumadda Puntland, oo ku tilmaamtay “mid meel ka dhac ku ah sharafta dowladnimo, khatarna gelinaysa amniga iyo xasiloonida Puntland, dhiirigelina u sameynaysa musuq maasuq iyo boob hantida ay Dowladdu uga masuulka tahay Shacabka Puntland. “
Baaqa cusub ee Isimada kasoo baxay ayey kusoo jeediyeen in agaasimihii xilka laga qaaday loo reebo agab iyo ciidan ku filan amnigiisa kaliya, maadaama, bey yiraahdeen, uu ku soo shaqeeyey xaalad adag.
Isimada ayaa sidoo kale taageeray baaqii Isimada ka horreeyey ee ahaa inay dhaqan-gasho wareegtadii uu madaxweyne Deni xilka uga qaaday agaasimihii hore 24-kii November 2021.
Isimada 12-ka ah ayaa soo saaray qodobada hoos ku qoran:
• In hantida PSF looga reebo agaasmihii hore agab iyo ciidan ku filan aminigiisa maadaama uu ku soo shaqeeyeyxaalado adag.
• Anagoo ixtiraamayna kala duwanaanshaha fikirka iyo tanasulka oo lafdhabar u ah nolosha aadanaha, waxan sidoodii ku qaadanay afarta qodob oo kale; qodobka 1-aad, 3-aad,4-aad iyo 5-aad.
Mmarkaanu midaynay shantii qodob waxay u qormayaan sidan:
1- Waa inay dhaqangashaa digreetadii madaxwwaynaha Puntland, kuna taariikhaysnayd 24 November 2021, ujeedaduna ahayd xil-lka qaadistil lagu sameeyey agaasime Jeneraal Maxamuud Cismaan Cabdullaahi, laguna magacaabay Sarreeyo Guuto Maxamed Amiin Xaaji Cabdullaahi Khayr.
2- Waa in hantida PSF looga reebo agaasmihi hore agab iyo ciidan ku filan amnigiisa maadaama uu kusoo shaqeeyey xaalad adag.
3- Waa in dawladu siisaa ciidamada PSF xuquuqdii ka maqnayd 13-ka bilood.
4- Waa in ay dawladdu bixisaa kharashka ilaalada gaarka ah ee Jeneraal Maxamuud Cismaan Cabdullaahi.